🥇 Akaụntụ nke ndị ọrịa na ezé
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 960
Vidiyo nke ịkọ ndị ọrịa na ezé ezé
Denye iwu banyere ndị ọrịa na ezé ezé
Ọ bụghị ihe nzuzo na dentistry agbanweela ịbụ ezigbo ewu na afọ ole na ole gara aga, na-aghọ azụmaahịa na-enwe ọganihu ma ọ bụrụ na e nwere usoro njikwa ziri ezi. Onye ọ bụla na-agba mbọ ka ọ dị mma na nkọwa dị mkpa n'echiche ya bụ ịmụmụ ọnụ ọchị. Imirikiti mmadụ maara ihe usoro ndebanye aha na ọrụ dentistry dị ka, mana mmadụ ole na ole chere banyere etu esi ahazi njikwa na ịhazi ajụjụ na ụlọ ọrụ ahụike ndị a. Otu n'ime ngalaba kachasị dị mkpa bụ, ikekwe nlekota na ndebanye aha nke ndị ahịa. Accounting nke ndị ọrịa na eze bụ usoro siri ike. Na mbụ, ọ dị mkpa ịchekwa akwụkwọ nke onye ahịa ọ bụla, ebe edere kaadị akụkọ ahụike niile. Ọ na-abụkarị ikpe ahụ na ọ bụrụ na onye ahịa na-anata ọgwụgwọ n'otu oge na ọtụtụ ndị ọkachamara, ọ ga-ebu kaadị a mgbe niile.
Nke a butere ụfọdụ nsogbu: kaadị ndị ahụ toro eto, jupụta na data. Mgbe ụfọdụ ha furu efu. Youkwesịrị iweghachite data niile, na-edekọ otu ọzọ. Ọtụtụ ndị dọkịta na ụlọ ọgwụ na-eche maka ịmezi usoro ndebanye aha onye ọrịa. Ihe achọrọ bụ usoro mmemme nke ndị ọrịa eze na-aza ajụjụ nke ga-ekwe ka iwelata akwụkwọ akwụkwọ na akwụkwọ ntuziaka n'ihi adịghị mma ha na enweghị ntụkwasị obi. Achọtara ihe ngwọta ya - nyocha akpaghị aka nke ndị ahịa na dentistry (mmemme iji duzie ajụjụ gbasara ndị ọrịa na ezé). Iwebata mmemme IT nke dentistry ndị ọrịa ’njikwa iji kwado usoro azụmahịa mere ka o kwe omume ngwa ngwa dochie akwụkwọ akụkọ na-ebelata mmetụta nke njehie mmadụ na systematization na nhazi nke nnukwu data. Nke a weputara oge nke ndị ọrụ na dentistry iji tinye ya na ọrụ zuru oke nke ọrụ ha. N'ụzọ dị mwute, ụfọdụ ndị njikwa, na-anwa ịchekwa ego, malitere ịchọ ụdị mmemme mmemme nke njikwa ndị ọrịa eze na njikwa na ịntanetị, na-ajụ saịtị ọchụchọ yana ajụjụ dị ka nke a: 'budata mmemme nke onye ọrịa na-aza ajụjụ' Ma ọ bụghị otú ahụ mfe.
Nke a na - ebute n’eziokwu na ụlọ ọrụ ahụike dị otú ahụ na - enweta usoro ngwanrọ nke njikwa njikwa ahụike na dentistry nke dị oke ala, ọ na - eme na ozi ga - efunahụ enweghị ụzọ ọ bụla iji weghachi ya, ebe ọ bụ na ọ nweghị onye nwere ike ịkwado mgbake ya. Yabụ, ịnwa ịchekwa ego na-abụkarị mmefu dị elu karị. Dị ka ị maara, ọ dịghị ihe dịka cheese free. Kedu ihe dị iche n'etiti mmemme dị elu nke ndị ọrịa na-aza eze na ezé dị ala? Isi ihe bụ ọnụnọ nkwado nke teknụzụ nke ndị ọkachamara ọkachamara, yana ike ịchekwa ọtụtụ data ọ bụrụhaala na ịchọrọ. Atụmatụ ndị a niile bụ akụkụ nke echiche nke 'ntụkwasị obi'. Companlọ ọrụ ndị chọrọ usoro nke ndị dọkịta na-agwọ ọrịa na-aza ajụjụ iji nye ikike na nyocha zuru ezu nke ndị ọrịa na ezé aghaghị ịghọta otu ihe dị mkpa - ọ gaghị ekwe omume ịnweta usoro free nke ndị ọrịa na-aza ajụjụ na eze. Zọ kachasị nchebe bụ ịzụta ngwa dị otú ahụ yana nkwa dị mma yana ikike ịme mgbanwe na mmelite ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Otu n'ime ndị isi n'ọhịa nke mmemme nke ndị ọrịa na-aza ajụjụ ezé bụ mmepe nke ndị ọkachamara nke USU-Soft. Ihe omume a banyere ịgwọ ndị ọrịa na ezé na obere oge enwere ike merie ahịa ọ bụghị naanị Kazakhstan, kamakwa mba ndị ọzọ, yana ndị agbata obi. Kedu ihe na-eme ka ụlọ ọrụ nke usoro azụmahịa dị iche iche họrọ usoro USU-Soft nke akpaaka na nyocha nke usoro mmepụta?
Njikere edere ndebiri ndebiri na-enyere gị aka belata oge ọ chọrọ iji dejupụta ndekọ ndekọ ahụike gị. Tụkwasị na nke ahụ, nnweta ndebiri na-eme ka ndị dọkịta niile dejupụta ndekọ ndekọ ahụike dịka otu ndebiri ahụ si dị. Iji mee ndezi na ndebiri ndebanye aha ndị ọzọ na-enyere aka belata oge achọrọ iji mejupụta ha ma bulie ọrụ nke ndị ọrụ ụlọ ọgwụ, ịchọrọ ikike nnweta nke na-enye gị ohere ịgbanwe ndebiri ndị nkịtị. Ikike nnweta a na-enye gị ohere idezi ndebiri ndebanye outpatient ọbụlagodi na enweghị ikike inyocha ikike idezi ndekọ ọpụpụ n'ozuzu ya. Mgbe onye ọrịa na-eme nleta mbụ, ozi gbasara mkpesa nke onye ọrịa, nchoputa, ọnọdụ eze na ọnụ nwere ike ịbanye na mmemme ahụ site na ịmepụta nyocha mbụ.
Taa, ndị mmadụ na-achọwanye ndị na-eweta ọrụ na ịntanetị. Fọdụ ndị mmadụ nwere ntụsara ahụ karịa iji Yandex na igwe nchọta Google, ụfọdụ mmadụ na-eji maapụ, ụfọdụ na-ejikwa netwọkụ mmekọrịta. Ọ bụrụ na ama gị mara ebe niile, ọ dị mfe - ndị ahịa nwere ike ịbịa na saịtị gị ozugbo site na iji kọmputa ede aha ya na njin ọchụchọ. Ha nwere ike ịkpọ site na saịtị ma ọ bụ, ọ bụrụ na enwere ụdị nzaghachi, zipu arịrịọ. Otu onye ga - achọta gị na netwọkụ mmekọrịta ma degara gị akwụkwọ ebe ahụ. Ngwa sitere na netwọkụ mmekọrịta na-ebula ụzọ ruru 10% nke okporo ụzọ izizi niile, yana na mpaghara mpaghara ọnụ ọgụgụ ndị a na-etokwa. Ọ bụ ya mere na ọ bụ a kwesịrị iji akpaaka usoro nke dentistry ọrịa aza ajụjụ na-egosi gị ihe ndị kasị zuru okè ụzọ nke na-eme advertisement nke gị ụlọ ọrụ. Were nzọụkwụ mbụ n'ime akpaaka nke nzukọ gị!